FADEEXAD: Garsoore Ka Dhabeeyey Ballanqaad Ahaa Inuu Rikoodhe Ku Qabanayo Turkey Ciyaartii Sweden Ee Sabtidii – Cadalool.com
FADEEXAD: Garsoore Ka Dhabeeyey Ballanqaad Ahaa Inuu Rikoodhe Ku Qabanayo Turkey Ciyaartii Sweden Ee Sabtidii
Xulka qaranka Sweden ayaa soo nooleeyey rajada ay ka qabaan inay kaalinta koowaad kaga soo baxaan Group B2 ee tartanka Nations League kaddib markii ay 1-0 kaga adkaadeen Turkey.
Gool uu daqiiqaddii 71aad u dhaliyey Andreas Granqvist ayaa Sweden gacanta u geliyey guushii ugu horreysay ee ay gaadho, waxaanay sugaysaa ciyaarta ay Salaasada Ruushka iskaga hor iman doonaan, taas oo haddii ay guuleysato ay kusoo bixi doonto, halka Turkey aanay afartoodii ciyaaroodna mid guul keenin, sidaas daraadeedna mar horeba u xaqiijisteen inay hadheen.
Ciyaartan oo uu garsoore ka ahaa Istvan Kovacs, ayaa waxa kasoo baxday fadeexad kaddib markii uu weeraryahanka xulka qaranka Sweden ee Marcus Berg uu sheegay in intii nasashada lagu jiray uu garsooruhu u sheegay inuu laba rikoodhe u qabanayo haddii ay ciyaartu ku adkaato.
Marcus Berg ayaa qaybtii hore ka gadooday go’aan uu garsooruhu ku diiday khalad laga galay oo ciyaartoygu aaminsanaa inuu rikoodhe ahaa, hase yeeshee, markii uu u tegay garsooraha ee loo sii baxayay waqtiga nashada, ayaa waxa uu garsooruhu u sheegay in haddii ciyaartu ku adkaato uu laba rikoodhe siin doono qaybta dambe.
“Waqtigii nasashada ayaan la hadlay garsooraha, waxaanu igu yidhi ‘haddii ay rikoodhe noqoto, qaybta dambe ayaan laba rikoodhe ku siinayaa’ kaddib mid ayaanu helnay, waanan ku faraxsanahay inaanu ku guuleysanay.” Sidaas waxa yidhi Marcus Berg oo bannaanka keenay in garsooruhu usii ballan-qaaday inuu rikoodhe siinayo.
Inkasta oo go’aanka uu garsooruhu ku qabtay rikoodhuhu ahaa mid u eg sax, haddana waxa ceeb ku ah inuu ballan kusii qaaday inuu rikoodhe qabanayo oo sidii uu u sheegayna uga dhabeeyey.